पहिलो पटकको महिनावारी
पहिलो पटक महिनावारी हुँदा केके समस्या देखापर्न सक्दछन् ? : पहिलो पटक महिनावारी भएका किशोरीहरू योनीबाट रक्तस्राव भएको देखी आत्तिने हुन्छन् । उचित जानकारीको अभाव र अज्ञानताले गर्दा किशोरीहरूले यो रोग नै हो कि भन्ने पनि ठान्छन् । कसै कसैमा केही बढी रक्तस्राव पनि हुन सक्छ । महिनावारी हुँदा कमजोरी महसुस हुने, अल्छीपना, रिङ्गटा लाग्ने, तल्लो पेट दुख्ने, स्तन दुख्ने, हातखुट्टा दुख्ने, हिँड्न गाह्रो हुने, खान मन नलाग्ने आदि हुनसक्छ । यति मात्र नभई मानसिक तनाव पनि हुन सक्छन् तर त्यस्ता धेरै समस्याहरू बिस्तारै आफै ठीक हुन्छन् ।त्यसैले पहिलो पटक महिनावारी हुँदा घरमा भए आमा वा दिदीलाई , विद्यालयमा भए शिक्षक वाशिक्षिकालाई जानकारी गराई सहयोग लिनु पर्छ । परिवार र विद्यालयले पनि यस्ता किशोरीहरूको समस्या बुझीत्यसको उचित व्यवस्थापन गराउनु पर्दछ ।
महिनावारी हुँदा पेट दुख्ने आदि समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ? : महिनावारी हुँदा पाठेघर खुम्चिने र खुल्ने प्रक्रिया हुने हुँदा तल्लो पेट दुख्ने गर्छ । सामान्यतया ८५ प्रतिशत महिलालाई महिनावारी हुँदा तल्लो पेट दुख्ने गर्छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य उपायहरूजस्तै तल्लो पेटमा हलुका तरिकाले मालिस गर्ने, तातो पानी रबरको थैली वा बोतलमा राखेर सेक्ने, अदुवाको धुलो राखी चिया वा तातो पानी पिउने, पेट अत्यधिक दुखेमा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम सिटामोल, ब्रुफेन जस्ता दुखाई कम गर्ने औषधि सेवन गर्न पनि सकिन्छ। यो प्राकृतिक अवस्था भएको र यसले कुनै ठूलो हानी गर्दैन भन्ने बुझेर यसप्रतिको चिन्ता हटाउन नियमित योग, प्राणायाम तथा हलुका व्यायाम गर्नाले यस्ता मानसिक चिन्ता हट्न मद्दत पु¥याउँछ । चिन्ता गर्नु र डराउनु पर्दैन ।
यो सामाग्रि हामीले युवा तथा किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा केन्द्रित अनलाईन पत्रिका sahiumersahikadam.org बाट साभार गरेका हौं । थप KHULDULEE मेठाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।